Bawdada & Lugaha
Tuwaalka Faahfaahinta Gawaarida
Tuwaalka Qalajinta Timaha
Tuwaalka Nadiifinta Guryaha
Jilibkaygu wuu xanuunaa markaan foorarsado
Jilbahaygu wuu xanuunayaa markaan foorarsado oo aan toosiyo In ka badan 25% dadka waaweyn ayaa qaba xanuun jilibka ah. Jilibadeena waxaa ku dhaca caddad badan oo cadaadis ah howlaheena maalinlaha ah awgeed. Haddii aad ka xanuunsan tahay jilibka, waxaad u badan tahay inaad ogaatay in jilibkaagu ku xanuuno markii aad foorarsato oo aad toosiso. Iska hubi ...
Muxuu Jilbahaygu u Waxyeellayaa?
Muxuu Jilbahaygu u Waxyeellayaa? Jilibka xanuunku waa xaalad guud oo ku dhacda dadka da 'kasta leh. Waxay noqon kartaa natiijada dhaawaca ama dhaawaca, ama xaalad caafimaad oo keenta jilib xanuun joogto ah. Dad badan ayaa la kulma xanuun weydiinaya maxaa jilibkeygu u xanuunaa markaan socdo? ama maxaa jilibkeygu u xanuunaa markii ...
Shaqada ilaalinta dhexda
Waa maxay ilaalinta dhexda？ maxay tahay doorka ilaalinta dhexda? Ka ilaalinta dhexda, sida magaca ka muuqata, waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo dhexda ku hareeraysan marada. Ka ilaalinta dhexda ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dhexda iyo dhexda. Waqtigan xaadirka ah, waa xulashada ugu fiican ee shaqaale badan oo fadhiga iyo shaqaalaha muddada dheer taagan ...
Baruurta Caloosha sidoo kale waxay u noqon kartaa mid u xun Maskaxdaada
Baruurta caloosha ayaa muddo dheer loo maleynayay inay si gaar ah ugu xun tahay wadnahaaga, laakiin hadda, daraasad cusub ayaa ku dareysa cadeymo dheeri ah fikradda ah inay sidoo kale maskaxdaada u xun tahay. Daraasaddan, oo ka socota Boqortooyada Ingiriiska, ayaa lagu ogaaday in dadka buurbuuran ee leh dhexda iyo miskaha oo aad u sarreeya (cabbirka dufanka caloosha) ay leeyihiin sl ...
Sida Loo Xidho Maaskaro Si Sax ah COVID-19
Hubso in maaskaro ay daboolayso sanka iyo afka Fayraska COVID waxaa ku faafa dhibco; wuu faafaa markaan qufacno ama hindhino ama xitaa hadalno. Dhibic ka timaada hal qof ayaa loo gudbiyaa qof kale, ayay tiri Dr. Alison Haddock, oo la socota Baylor College of Medicine. Dr. Haddock waxay sheegaysaa inay aragto khaladaadka maaskaro. K ...
7 Faa’iidooyinka Ay Leedahay Biyaha Lagu Cabo Caloosha Faaruq Subaxdii
1. Waxay wanaajineysaa dheef-shiid kiimikaadkaaga Daraasaduhu waxay muujiyeen in cabitaanka biyaha caloosha madhan ay gacan ka geysan karto kordhinta heerka dheef-shiid kiimikaadka ilaa 30%. Tani waxay ka dhigan tahay in xaddiga kaloriinta la gubo ay kordhayso ku dhowaad saddex meelood meel. Ma ogtahay waxa ay taasi ka dhigan tahay sax? - Miisaanka oo yaraada! Haddii heerkaaga dheef-shiid kiimikaad ...
Xidhiidh Dheeraad Ah
Cinwaanka: Qolka 2007, Lambarka A8, Aagga A, Xarunta Dhexe ee Xarunta Caalamiga ee Konggang, Degmada Dongli, Tianjin, Shiinaha
Gaaritaan Degdeg ah